NNCP nhọrọ dị oke mma maka mgbanwe nchekwa nke faịlụ, ozi na ndị ọzọ | Site na Linux
NNCP nhọrọ kachasị mma maka mgbanwe nchekwa nke faịlụ, ozi na ndị ọzọ
NNCP (Ntughari na Ntughari) bụ ngwa-ọgu etso na ha na-eje ozi maka ịnyefe faịlụ, ozi ịntanetị na iwu n'ihi na ogbugbu na ụlọ ahịa na-atụ mode. Na-akwado ọrụ na sistemụ sistemụ arụmọrụ POSIX.
Uru a kara aka inyere aka iwu obere network site na enyi rue enyi (F2F) na usoro ntinye ederede maka nnyefe faịlụ echekwara na ọkụ-na-echefu mode, yana arịrịọ faịlụ, email, na arịrịọ mmezu iwu. A na-ezoro ngwugwu niile ezigara (njedebe na njedebe) ma igodo ọha na eze mara nke ọma.
Izo ya ezo yiri Tor (yabasị) ma jiri ya maka ngwugwu niile. Ọnụ ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye ahịa na ihe nkesa ma jiri ụdị omume ịkwanye na ntuli aka.
Ihe dị iche n ’etiti NNCP na UUCP na FTN (FidoNet Technology Network), na mgbakwunye na izo ya ezo na nyocha akpọrọ n'elu, Ọ bụ nkwado igbe maka netwọkụ floppin na kọmpụta dịpụrụ adịpụ na netwọkụ mpaghara na ihu ọha na-enweghị nchebe. Akụkụ nke NNCP dịkwa mfe njikọta (yana UUCP) yana sava ozi dị ugbu a dị ka Postfix na Exim.
N'etiti ngwa NNCP nwere ike bụ nzukọ nke nzipu / nzipu ozi na igwe na ejighi mkpa njikọ intaneti na-adịgideNyefee faịlụ n'okpuru njikọ netwọk na-ejighị n'aka, nyefe nchekwa nke nnukwu data na mgbasa ozi anụ ahụ, na -emepụta ihe echedoro pụọ na netwọkụ data data MitM dịpụrụ adịpụ, na-agafe nyocha na ntanetị.
Kemgbe a na - achọta igodo decryption naanị na nnata oziN'agbanyeghị otu esi ebufe ngwugwu ahụ na netwọkụ ma ọ bụ mgbasa ozi anụ ahụ, ndị ọzọ enweghị ike ịgụ ọdịnaya ahụ, ọbụlagodi mbupu mbupu. N'aka nke ya, nyocha site na mbinye aka dijitalụ anaghị ekwe ka e guzobe nkwupụta aghụghọ na mkpuchi nke onye na-ezigara onye ọzọ.
Ugbu a NNCP dị n'ụdị ya 5.0.0, mbipute nke enwere ike ịchọta n'ime ihe ọhụụ kachasị ama:
Project nke Akwụkwọ ikike maka GPLv3 + gbanwere GPLv3 naanị, n'ihi enweghị ntụkwasị obi nke SPO mgbe Richard Stallman si na ya pụọ.
AEAD izo ya ezo juputara na ChaCha20-Poly135 128 KiB blocks. Nke a na-enye ohere ka data dị na ngwugwu ezoro ezo mee ka a mata ya ozugbo na ofufe, kama ịda na ngwụcha ịgụ ọgụgụ zuru ezu.
Usoro faịlụ nhazi gbanwere site na YAML ka Hjson. Akwụkwọ ọgụgụ nke ikpeazụ ahụ dị mfe ma pere mpe, ma nwee otu nkasi obi maka mmadụ na-arụ ọrụ na nhazi.
Algọridim zlib algorithm nke Zstandard dochie ya, a na-eburu a dị ịrịba ama na-abawanye na mkpakọ ọsọ na budata elu arụmọrụ.
nncp-call e nyere nhọrọ iji lee nchịkọta ndị dị (-list) n'akụkụ dịpụrụ adịpụ, na-enweghị nbudata ha. Na mgbakwunye na ikike ịhọrọ nbudata nchịkọta (pkts)
nncp-daemon natara -inetd nhọrọ, nke na-enye ya ohere ịgba ọsọ na inetd ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, site na SSH
Enwere ike ịntanetị njikọ ọ bụghị naanị site na TCP, kamakwa site na ịkpọ iwu ndị dị na mpụga ma na-ekwurịta okwu site na stdin / stdout.
Ngwa akụrụngwa-Umask (site na iji ikikere agbatị dị ka 666/777) na ikike ịhazi umask n'ụwa niile site na faịlụ nhazi, na-eme ka ojiji nke ndekọ ndekọ ihe eji eme ihe n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ dị mfe;
N'iji ojiji nke usoro ihe Go.
Esi tinye NNCP na Linux?
Ntinye nke ịba uru a dị mfe, anyị ga-adabere na Go etinyeworị na sistemụ ma nweta ụdị NNCP kachasị ọhụrụ nke bụ 5.0.0. Enwere ike inweta nke a site na ọnụ ya na iwu wget na ụzọ ndị a:
Mgbe nke ahụ gasịrị, ha nwere ike ịmalite na nhazi ahụ, site na nke ha nwere ike ịchọta ozi dị mkpa Na njikọ na-esonụ.
Nakwa na isi peeji nke ahụ Ọ bụ dị ka ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » NNCP nhọrọ kachasị mma maka mgbanwe nchekwa nke faịlụ, ozi na ndị ọzọ
Frank Davida dijo
Na windo enwere nsụgharị?
Zaghachi Frank Davila
PicoLibc ọbá akwụkwọ C maka usoro agbakwunyere na obere akụrụngwa
Ọkara-Ndụ: Alyx enweela ụbọchị maka nlọghachi echere ogologo oge nke egwuregwu vidio Valve